Ezona Ndlela ziPhezulu zokuThengisa zeSizwe sokuKhokela | Martech Zone
Ezona ndlela ziPhezulu zokuThengisa zeSizwe sokuKhokela
Lwesine, Matshi 20, 2014 NgoLwesithathu, Matshi 19, 2014 Douglas Karr
Sichukumise isiseko kunye nomthengi omdala namhlanje ongakhange asebenze nathi kunyaka ophelileyo. Kunyaka ophelileyo, iinkampani ezininzi bezisebenzisa izixhobo zethu kuba besiphambi kwegophe kwizicwangciso zokukhangela. Ngoku, ndiyakholelwa ukuba sityhala abathengi bethu beqhubeka nendlela eya kwizicwangciso zobutyebi bomxholo kunye nentengiso ezenzekelayo. Iyavuka, sikumkhondo ofanelekileyo. Ngokuka-Oracle Eloqua, Itekhnoloji, ukuthengisa nge-imeyile, isantya kunye nomxholo osisityebi zezona ziqhuba emva kwezona ndlela zinamandla zokuthengisa ezisasazwe kwi-intanethi.
I-imeyile ithathwa njengeyona nto ibaluleke kakhulu kwintengiso yedijithali kwaye isidingo sesantya kunye nokubaluleka yeyona mingeni mikhulu, ngokweNgxelo ka-Oracle Eloqua, Ukuchaza iMarketer yanamhlanje: Ukusuka kwinyani ukuya kwiNgcono. Ingxelo iqaqambisa iindawo eziphambili apho abenzi bezigqibo zentengiso kufuneka bajonge- kunye nokusilela okumangalisayo kwinxalenye yabathengisi banamhlanje ngokwabo. Amaqhinga okuthengisa atyebileyo, njengamaphepha amhlophe kunye nokusasazwa kwewebhu, kubalulekile ekuveliseni phambili kunye nokukhulisa ukukhokelela. Ukongeza, izakhono zokuyila kunye nolwazi lwethekhnoloji yentengiso zibaluleke ngokulinganayo kwindawo yentengiso yanamhlanje
tags: UkuThengiswa kweMpahlaukuthengiswa kwedathaemailisizukulwana esikhokelayokhokelaItekhnoloji yentengisoumthengisi wale mihlaI-oracle eloquaiiwebcastsamaphepha amhlophewhitepapers
Ukuthengisa kumxholo akuThengisi KUNYE noMxholo
I-Evercontact: Hlaziya ulwazi lwakho loQhakamshelwano ngeziTyikityo ze-imeyile ezingenayo
Mar 20, 2014 ngo 11:15 PM
Akuthandabuzeki ukuba i-imeyile yenye yezona zinto zibaluleke kakhulu kwintengiso yedijithali.Ukuba nesicwangciso esifanelekileyo nesijolise kwi-imeyile kubaluleke kakhulu kumxube wakho wentengiso; ngaphandle kwesicwangciso esichazwe kakuhle ukuthengisa nge-imeyile i-ROI kunokwenzeka ukuba ihlupheke.
UCaleb aka Weez
Mar 24, 2014 ngo-8: 18 AM
Ewe kodwa ngamanye amaxesha xa umrhwebi ebotshelelwe ngemali eziinkozo kufuneka bayeke ngokwesiqhelo amaqhinga exesha elide kwaye bathengise imali esulungekileyo…
Ndikhe ndikule meko kwaye ngokunyaniseka ibingeloxesha lokuthathela ingqalelo izibonelelo ezizayo zoluhlu lokwakha. Kodwa xa indalo iphela ibuyiselwe kulungelelwaniso ngokunjalo nolwakhiwo luluhlu 🙂
Mar 24, 2014 ngo-9: 29 AM
@MarketSecrets: i-disqus bendiya kuthi ndityhale umrhumo we-imeyile. Ukuba ubhatalela amaqhinga ethuba elifutshane kwaye ufumana abantu kwindawo yakho… kutheni unganikeli ubulungu kwabo 'banokuba' nomdla kodwa abakakulungeli ukuthenga okwangoku? Oku kuyakwandisa utyalomali lwexesha elifutshane kwaye ikuvumele ukuba utyhale imiyalezo eyongezelelweyo kwabo babhalisele ezantsi kwendlela.
Mar 24, 2014 ngo 10:01 PM
Ndiyifumene inqaku lakho Caleb, kodwa ndiyavumelana noDoug.
Mar 24, 2014 ngo 8:42 PM